Umehluko phakathi kwamandla olwandle namandla we-wave | Ukuvuselelwa Okuhlaza
UDaniel Palomino | | Amandla wamanzi olwandle, Amandla we-Wave
Womabili la mandla avela olwandle, kepha uyazi ukuthi amandla omswakama namandla okuqhuma avelaphi?
Iqiniso kulula kakhulu ukwazi ukuthi liyini amandla futhi ukuthi igama linikeza izinkomba eziningi, ngokwesibonelo amagagasi, aqhamuka emagagasini nasolwandle, sekuvele kunzima kancane, kuyeza igagasi.
Kafushane futhi ngolwazi oluyisisekelo okufanele ulugcine ukuthi i- Amandla wamanzi olwandle njengoba sishilo ukuthi kuvela kumagagasi, ukunyakaza okuqukethe i- ukuphakama kolwandle futhi ikhiqize kuze kube kabili ngosuku ngokuheha iNyanga.
Ukusetshenziswa kwalolu hlobo lwamandla kakhulu kufana ne-hydropower (Sizokhuluma ngakho ngokuzayo). Lapho sesinedamu elisesiwombeni somlomo (umlomo walesi sikebhe sakhiwa yingalo eyodwa ebanzi esesimeni somsele owanwetshiwe) ngamasango nama-turbine wokubacindezela afakiwe, sikunikeza ukubaluleka kokuphakama okungafinyelelwa amagagasi.
Okusho ukuthi, lapho sekuzofinyelelwa emanzini amakhulu (igagasi liyakhuphuka), amasango avulwa ngokuzungezisa imishini yokuphehla ugesi ngamanzi angena echwebeni bese eqoqa umthwalo wamanzi owenele futhi ngaleyo ndlela akwazi ukuvala amasango avimbela amanzi kusukela ekubuyeni olwandle.
Lapho nje i-tide low ifika (i-tide low), amanzi ayakhishwa ngokusebenzisa ama-turbine.
Lokhu kuhamba kwamanzi kwenza imishini yokuphehla ijikeleze inqubo yokungena nokushiya amanzi futhi yikhona okwenza lo mkhiqizo wamandla kagesi.
Ngamandla amakhulu singathola izinzuzo nobubi.
Ngaphakathi kwezinzuzo kungashiwo ukuthi kungamandla avuselelekayo futhi kungamandla ajwayelekile, ngoba kuhlale kukhona lokho kuhamba kwegagasi kungakhathalekile unyaka.
Kodwa-ke, izingqinamba zinkulu, njengokuthi ikhiqiza amandla ezikhathi ezithile, kufanele ulinde kusenesikhathi nasekupheleni kosuku ukukhiqiza, ubukhulu nezindleko zezinsiza zakho, njll.
Ngakolunye uhlangothi sinefayela le- amandla we-wave, okungekho lutho ngaphandle kwamandla amaza njengoba ngishilo ngaphambili futhi yilokho amagagasi olwandle aqukethe inani elikhulu lamandla etholakala emimoyeni, ukuze indawo yolwandle ibonakale njengomqoqi ocwilisiwe wamandla omoya.
Ingenye yezinhlobo zamandla avuselelekayo afundwe kakhulu namuhla futhi kunamadivayisi amaningi njenge I-Cockerell's Raft kanye neDada likaSalter ukuguqula ukuhamba kwegagasi kube ugesi
Idada leSalter lintanta ngendlela yesimo sedada (yingakho igama lalo) lapho ingxenye emincane kakhulu iphikisana namagagasi ukuze imunze ukunyakaza kwawo ngangokunokwenzeka. Lokhu kuntanta kujikeleza ngaphansi kwesenzo samaza azungeze i-eksisi ahlinzeka ukunyakaza okujikelezayo kuzungeze i-eksisi yawo, ukuphatha ukuvula ipompo likawoyela, elibhekele ukuhambisa i-turbine.
Ngokuphambene nalokho, isihlenga seCockerrel sinezingxenyekazi ezishiwoyo ezilungele ukuthola umthelela wamaza. Lezi zihlenga ziyakhuphuka futhi zehle zisebenzisa le nhlangano ukushayela injini ehambisa i-generator ngohlelo lwe-hydraulic.
Kodwa-ke, kukhona futhi okuhle nokubi, njengenzuzo sithola ukuthi umthelela wezemvelo awukho nhlobo, izindawo eziningi ezisogwini zingafakwa ethekwini noma kwezinye izakhiwo ngaphandle kokuthi ingumthombo wamandla avuselelekayo.
Njengezithiyo; Amandla we-Wave awakwazi ukubikezelwa ngokunembile, ngoba amagagasi ancike ezimweni sezulu, ekufakweni kolwandle kunzima kakhulu ukudlulisa amandla akhiqizwa ezweni, njll.
Njengoba ukwazi ukubona, kulula ukwehlukanisa izinhlobo ezimbili zamandla ezikhiqizwa olwandle, yize singasebenzisa futhi amandla avela emisakazweni yasolwandle, ukuguqulwa kwamandla ashisayo asolwandle kanye namandla avela ku-saline gradient, okuthile okungajwayelekile kepha ukuthi Namuhla kuyafundwa ukusebenzisa kahle ulwandle nokuzama ukuthi esikhathini esizayo amadolobha wonke angazimela ngalezi zinhlobo zamandla avuselelekayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuvuselelwa Okuhlaza » Amandla avuselelekayo » Amandla wamanzi olwandle » Umehluko phakathi kwamandla olwandle namandla we-wave
UJosep Ribes kusho
AmaFrance anezikhungo zawo zokugula ngezimoto echwebeni loMfula iRance iminyaka engama-50, futhi ngokungafani noZapatero, babheja ocwaningweni lwale mandla, ngesipiliyoni esisodwa, esikhundleni sokunikeza izigidigidi zezicathulo ngamandla, ngomqondo kuphenywe, futhi kungabi nzuzo okwamanje. Uma sesivele sazi ukuthi kuzoba nenzuzo ngokuzayo, lapho-ke sizotshala ngendlela efanele kubuchwepheshe.
Phendula uJosep Ribes
UDaniel Palomino kusho
Angikwazi ukuvumelana kakhulu nawe Josep.
Ozithobayo futhi ngiyabonga ngokuphawula kwakho.
Phendula uDaniel Palomino
UValladolid unxusa ukusebenzisa ibhayisikili ngenxa yokungcola okuphezulu
ISpain kuzofanele ifake imali ezimotweni zikagesi ukuhambisana ne-EU